"Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana." 1 Jaona 4:16
"... hahalala ny fitiavan’i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana. " Efesiana 3:19
Iza moa Andriamanitra? Fanontaniana fototra, fanontaniana tsy takatry ny saina! Tsy afaka namaly izany tamin’ny fisainantsika fotsiny isika. Andriamanitra dia naneho ny tenany tamin’ireo olona voalohany, amin’ny maha Andriamanitra tsitoha Azy, Ilay Avo Indrindra, akaiky kanefa masina, tsy takatry ny sain’olombelona. Naneho ny tenany tamin’i Mosesy Izy, hoe: “Izaho Izay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay”. Naneho ny tenany tao amin’ny Testamenta Vaovao Izy, hoe Rain’ireo izay mino an’i Jesosy. Ary voasoratra any amin’ny faramparan’ny Testamenta Vaovao izao teny tena lehibe sy feno hamamiana izao: “Andriamanitra dia fitiavana”.
Raha momba ny olombelona, dia lazaina fa manome na mandray fitiavana izy, fa tsy azo lazaina hoe izy dia fitiavana. Fa raha momba an’Andriamanitra kosa, dia lazain’i Jaona fa tsy vitan’ny hoe tia antsika fotsiny Izy (na dia marina aza izany), fa Izy dia fitiavana.
Tsy saro-takarina ny fitiavan’Andriamanitra, fa fitiavana miasa, fitiavana manolo-tena. Tao amin’i Jesosy no nahafantarantsika ny fitiavan’Andriamanitra, tamin’ny nahatongavan’Ilay Zanak’Andriamanitra tetỳ an-tany, tonga olombelona mba hanatona antsika. Jesosy dia “nandehandeha nanao soa” (Asan’ny Apostoly 10:38). Avy eo Izy dia nanaiky ho faty teo amin’ny hazofijaliana, mba hanafaka antsika amin’ny fahadisoantsika, amin’ny fahotantsika.
Izany no maha tsy manam-paharoa ny finoana kristiana: izy no mampiseho an’Andriamanitra ao amin’i Jesosy Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra, tonga olombelona mba hamonjy antsika.
Ry fitiavana madio, tsy takatry ny saina,
Maha Andriamanitra Ilay Andriamanitra Avo Indrindra,
Izay nanome ny Zanany,
Mba hanehoany ny tenany—
Eto amin’ity tontolo ity,
Rakotry ny haizin’ny ota,
No nahita anao ny masonay,
Ary nikasika anao ny tananay.